China HP COB yakatungamirwa kukura Chiedza Kugadzira uye Fekitori | Fullux
HP COB Yakatungamira kukura Chiedza ndiwo akasimba masimba akatungamira ekukura mwenje, yakasarudzika dhizaini diki huwandu hwevarimi vega varimi, anoshandiswa zvakanyanya mutende, diki epurazi ect, nyore kuisa nekuchengetedza, inogona zvakananga panzvimbo pezvo HID, HPS ine simba rakaringana kubva kumbeu kusvika pakukohwa!
1. Chiedza chezuva chinogadziriswa.
Wavelength ndeye 350-800nm, inosanganisira ese anobatsira mwenje wezuva wavelength, saka takadaidza mwenje wezuva.
75W COB uye 3W LED iboka rakakwana, kwete chete kugadzirisa mwenje yunifomu dambudziko uye zvakare yakagadzirisa PAR kukosha haina kukwana dambudziko, Plus Aluminium mwenje kesi yakanaka kudziyisa dissipation inotsigira.
HP vhezheni yekupedzisira slim dhizaini kwete chete yakatetepa asi zvakare simba rakakura kuburitsa uyezve inogona kuchengetedza 30% yekutumira mutengo base pane imwechete watt.
Aluminium lase kesi kwete chete inokurudzira kugadzirisa kupisa kupisa dambudziko. asi zvakare batsira LED kuburitsa simba kuti riwedzere.
3. Yakakwira-inoshanda 3in1 module dhizaini
LED, lens uye singi yekupisa yakagadzirirwa se3in1 module, ichisimbisa iyo tembiricha yekushanda yakaderera pane 55 ℃ .Hat-kupisa dissipation mwero uri 30% yakakwira, inogona kushandiswa munzvimbo dzakasiyana.
Mumwe nemumwe sphere lens ndiyo yakanakisa lens mushure mekunge taedza nzira dzakawanda. iyo nzvimbo yezvikamu lens ndeye 90 degree, mwenje zvakare ichaburitsa yakafara kure nepakati pe lens. Izvi zvinoreva kuti hatisi kungoona chete chikamu asi zvakare kuona nzvimbo yekuvhara.
4. Yakakwirira PPFD uye yakafararira kufukidza
3W akatungamirira + Cob
yakazara yakazara 380-800nm
Veg / ruva
9.0 makirogiramu (18.7lbs)
• Clone, mbesa ,, danho rekudyara, kumera, kukohwa
Dzimwe sarudzo dzenhevedzano:
Pashure: Helios Led kukura Chiedza
Zvadaro: ARC300 / 400 Isina mvura COB LED KUKURA CHIEDZA